Izitolo eziyingozi kakhulu eParis: I-Curiosity Cabinets nokuningi
IYurophu EFrance EParis
Izitolo ezibucayi nezama-Quirky eParis: Kusukela kuCuriosity Cabinets kuya kubathengisi
Ukusesha I-Strange eParis?
UMarc Dantan / Deyrolle
I-Paris ingaziwa ngamamyuziyamu wezobuciko ezidumile nemikhiqizo yomhlaba wonke, kodwa futhi yindawo lapho ungakhubeka khona ngokumangalisayo nokuziqhenya okumangalisayo kunoma yiliphi inani lezindlela zomgwaqo ezingenasidingo. Ngokungafani nezinhlobonhlobo eziningi zomhlaba wonke, lapho "okuqhaqhakazile" kufinyelela ekutheni kube nemicikilisho ye-hipster irony ne-kitschiness yokuzikhethela, izitolo zikaParis ezithengisa kakhulu - ezivela emakhandini e-curiosity kuya kubathengisi bezintambo kanye nezincwadi zokubhuka-zibonakala zivela ngesinye isikhathi, futhi zibonakala zingaboni kahle amandla abo okupholisa.
Leli qoqo lezitolo - ezinye ezindala, ezinye ezintsha - zimelela ohlangothini lwe-quirkier lomuzi, futhi ngokuqinisekile luzofaka ukuqala kokuvakashela kwakho. Ngakho-ke lapho lezi zikhumbuzo ezaziwa njengeLouvre Museum kanye ne- Eiffel Tower zifanelwe isikhathi sakho, lezi zindawo eziyinkimbinkimbi ziqinisekile ukuthi zizokwenza ukwesaba, ngezinye izikhathi zidideke futhi mhlawumbe zimbalwa.
Funda izici ezihlobene:
Amaqiniso Ayisimangalo Neziphazamisayo NgeParis
Izinto eziningi ezingavamile neze-Touristy Things to Do eParis
Izwi lesilumkiso: eziningi zalezi zitolo zifaka izinto ezifana nezilwane ezikhokhisiwe, ngakho-ke uma u-squeamish noma uzwela ngezinto ezinjalo, ungahle ufune ukuvakashela ezinye zezindawo ohlwini lwethu. Funda ukuze uthole ukuthi yiziphi izitolo ezenzile lokho okushiwo amaFulentshi ukubiza izingxabano .
02 ka 09
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Deyrolle: Serving Up Strange Kusukela ngo-1831
I-ED / Ilayisensi eya ku-About.com
Eyasungulwa ngo-1831, lesi sitolo ngasentshonalanga kwe-chic St-Germain-des-Prés indawo igcizelela iKhabhinethi ye-curiosities ukuthambekela kusukela esikhathini esithile-kodwa isikhalazo sayo esiyingqayizivele sikhuthazela. Ephethe izinto zomlando wemvelo njengezinambuzane, izilwane, amadwala nama-mineral, lesi sitolo sinikeza umbukiso ongaziqabulanga. Kuwo wonke ama-nook no-cranny, uzothola izinto ezithakazelisayo (uma ziphazamisa kancane), njengezinhlobo ze-kangaroo ezinamafutha, ama-coral, amazinyo e-shark, amaqoqo we-butterfly ne-beetle, amaqoqo anezinkuni, nokuningi okuningi. Izinto eziningi zithengiswa, ngakho-ke uma unezindleko ezimbalwa futhi ufuna okuthile okumangalisa ukufaka igumbi lakho lokuphumula nokugxilisa ingxoxo phakathi kwezivakashi zakho, akukho ndawo engcono yokuphequlula lapha.
Ikheli: 46 rue du Bac, e- arrondissement yesi-7
I-Metro: I- Rue du Bac
Ucingo: +33 (0) 1 42 22 30 07
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni
L'Objet okhuluma: Isitolo sikaVintage sika-Paris esibucayi kakhulu?
I-Colette Davidson / Ilayisensi ku-About.com
Lesi sitolo sevintage / iKhabhinethi yelukuluku ingazizwa likhulu kakhulu kunoma ngubani onamahloni. I-Jam-igcwele izinto - kusukela ebhodleleni le-antique, amafulege anemibala, ama-chandeliers kanye ne-kitschy uJesu neVirgin Mary emifanekisweni, isitolo esilungisiwe esiseMontmartre sikhulu ngokuphequlula noma ukuthenga. Izinto azifiki ezishibhile, ngeshwa, kepha konke lapha "kuFrance ngokweqiniso" nekhwalithi ephezulu, kanti omunye unomqondo wokufika ngezinto ezilodwa. Isitolo sigxile ezintweni ezingokwenkolo, futhi umnikazi wesitolo uhlale ejabulela ukusiza izivakashi ezifuna izinto ezithile. Lokhu kudingeke ukuthi kutholakale ukuthungatha ngemuva kwe-ntambama ukuhlola indawo yaseNyakatho.
Ikheli: 86 rue des Martyrs, arrondissement 18
Metro: Pigalle noma uAbbesses
Ucingo: +33 (0) 6 09 67 05 30
Vula: NgoMsombuluko -Mgqibelo 1:00 pm ngo-7: 30pm
04 ka 09
Yenza i-Deratisation: Izibonisi eziphezulu kusukela ngo-1925
E-Arouze Deratification eduze ne-Les Halles, into enhle iyalethwa eziphakeme. Adam Mayer / Creative Commons.
Yini engase ibe yinto egcwele ukuthuthumela kunokubona i-rat isheshayo ngaphesheya kwesikhulumi njengoba ulinde imitha eParis? Akukho kuningi. Ngaphandle, yebo, udoti ekhaya lakho noma ekusungulweni. I-Paris, ngeshwa, ikhaya lamagundane amaningi namanye ama-mongrels okufanele abale, namabhizinisi asendaweni aphikisana.
Izitolo ze-Exterminator zitholakala azungeze umuzi, futhi i-Aurouze Deratisation, evuliwe kusukela ngo-1925 endaweni eyaziwa ngokuthi i- Les Halles , idume kakhulu kunazo zonke, yenza ukubukeka kweqiniso kuya ku-movie ku-Disney ethandwa kakhulu ifilimu ye-animated Ratatouille. Njengoba ifilimu iphume, isitolo sesisuke sikhangele kakhulu kunezivakashi. Izitolo ngokwabo aziyona into ethakazelisayo - kuyindlela engavamile yokukhetha ukukhangisa ngokwabo. Amagundane, amagundane nezinye izintonga zihlala zingenasisindo emafasiteleni, ngokuvamile zivela ngezindlela ezingavamile (ukudansa, ukudla isidlwana seshizi) futhi kubheka ukuthi kungokoqobo kubonakala sengathi bazokweqa khona kuwe. Ngisho noma ungahambisani nanoma yikuphi ukuphila kwezintambo ngenkathi uhlala, lo mthengi ufanele ukuvakashelwa - ngisho nje nokubheka ewindini kusuka emgwaqweni - "ick factor" ehlanzekile.
Ikheli: 8 rue des Halles, arrondissement 1st
Metro: Les Halles noma uCatelet
I-Premium ye-Hygiene: i-Old-Fashioned Exterminator
Abaqothuli beParis baqinisekile ukuthi banendlela ehlukile yokukhangisa izinsizakalo zabo. Colette Davidson
Ayikwazi ukuthola okwanele izitolo eziyinqaba ze-exterminator? Isitolo esingaziwa kancane sisezindaweni ezisenyakatho-mpumalanga ye-arrondissement ye-19, eduze neParc de la Villette. Futhi, akufanelekile ngaphezu kokubheka okusheshayo, kodwa endaweni okuyiyona yokugcina eParis ukumelana ne-gentrification, lesi sitolo sifakazela isiko eside lomuzi wezentengiselwano ezizimele, ze-quirky.
Ikheli: 22 avenue de Flandre, isimiso se-19
Ucingo: +33 (0) 1 42 40 76 68
I-Comptoir General: Ibha, ilukuluku IKhabhinethi, nokuningi
Kungase kubonakale sengathi kukhona okuvela kwi-Twin Peaks, kodwa i-Comptoir General ayiyona into embi. I-Michel / Creative Commons
Leli gama elifihlekile elihle egcekeni elingaphandle kweCanal St Martin yilona uhlobo lwendawo yokuxhumana yama-multifunctional and arty ongayilindela ukuyibona eBerlin kunaseParis: itholakala njengesikhala semidlalo, isikhala sekhonsathi, isikhungo somphakathi esitolo kanye nekhabhinethi yezicuriosities. Ngaphandle kwanoma yisiphi isibonakaliso sokubonisa ukuthi kukhona khona, ungase uhambe ngakwesokudla emgwaqeni - kodwa ungenzi. Ngaphakathi, uzothola izihlahla ezide nezimila, izitshalo ezincibilikisiwe zesikhumba kanye namatafula e-retro ekhishini, lapho ungajabulela itiye le-mint noma i-cocktail yokugqoka. Ngaphandle kwezindawo ezimbili eziyinhloko yebha, i-Comptoir ihlukaniswe ngamakamelo amaningana - eyodwa isungulwe njengeklasi lokufundela ngama-1950, igcwaliswe ngempahla yesikole kusukela esikhathini; esinye esinezincwadi zokugcina, amarekhodi kanye nezingubo; kanye nekhabhinethi yamacuriosities lapho uzothola khona ama-skulls ezilwane, amatshe amatshe, ukugcoba izibuko nezinye izinto ezindala eziphazamisayo noma eziphazamisayo. Kusihlwa, indawo yokudlela encane yeLe Comptoir Generale inikeza izitsha ezilula zaseNdiya ezifana nama-samosas.
Ikheli: 80 Quai de Jemmapes, isimiso se-10
Ucingo: +33 (0) 1 44 88 20 45
Vula usuku nosuku lwama-11 ekuseni
Nature et Passion: Izimpungushe nezinyosi, Oh My!
Abaqoqi bayothanda la ma-flourescent-huedbutterflies ku-Nature et Passion. Colette Davidson
Abaqoqi bezigumbane babumbene! Lesi sitolo esingenakuqhathaniswa kuyamangalisa ukumangalisa - izimvemvane ezinamaphiko aluhlaza okwesibhakabhaka kanye nezibhungane ezihlaza ezikhanyayo zakha leqoqo elilula lezinambuzane. Buka umnikazi wesitolo - i-entomologist eqeqeshiwe-emsebenzini, ekhomba izimbungulu ezincane nezinkulu, futhi ziphiniwe emabhokisini amadebe endleleni. Izinambuzane zingamane zihlonishwe, noma zithengwe esitolo noma ku-intanethi. Kuyinto encane yokufinyelela ezindaweni eziqhelile zeGambetta , kepha kuwufanele umzamo uma u-aficianado / futhi noma endaweni ukuvakashela amathuna amancane asePere -Lachaise .
Ikheli: 2 rue Dupont de l'Eure, isimiso se-20
I-Metro: I- Gambetta
Ucingo: +33 (0) 1 40 31 50 01
Vula NgoLwesithathu-Lwesihlanu 12-6: 30pm, ngoMgqibelo 10 ekuseni ngo-6pm
Shakespeare kanye neNkampani: AmaDreams weBohemian of Old
Isitolo samabhuku esithandwa kakhulu, esibhekene nesikhungo seChristian Dame esiphakathi kwekota yeSt-Michel , yilo lonke iphupho lomthandi webhuku. Indawo ephawulekayo, ngokungangabazeki enye yezindawo zokubhuka ezitolo zikaParis , yavulwa yiGeorge Whitman osekupheleni kuka-1951. Ukufakwa kwamasheya endala nokufunda okusha kugcwalisa amashalofu aphezulu, wonke ahlanganiswe esikhaleni esincane kangangokuthi uzozibuza ukuthi izivakashi eziningi zingangena kanjani kanyekanye. Kodwa kufanelekile, bayakwenza. I-bookshop efana ne-fairytale iye yanda kakhulu edumile kangangokuthi kungadingeka ukuthi ulwe nabantu abaningi kulokho khophi lokugcina lweTropic of Cancer. Kodwa ukuqinisa izixuku kuwufanele ngempela. Ngaphezulu, uzothola umuntu edlala upiyano ohlala khona, futhi uzokwazi ukubona imibhede yabalobi abasha, noma "izikhukhula", ezishintsha umsebenzi esitolo indawo yokuhlala yamahhala. Amakati ahlalayo anezigqoko ezinothuli ngokuvamile abonakala elele ezinqolobaneni zezincwadi, noma elele eduze nezincwadi zokubhalisa, lapho abhalisi basebenzisa khona umzuzu okhona wokuphumula ukuze ufunde. Uma useParis isikhathi eside, cabanga ukuthi usebenzise ukufundwa mahhala ngabalobi be-Anglophone namakilasi okubhala okudala abanjwe lapha.
Ikheli: 37 rue de la Bûcherie, isifunda sesihlanu
Ucingo: +33 (0) 1 43 25 40 93
Vula ngoMsombuluko-NgoMgqibelo 10 ekuseni kuya ku-11pm, ngeSonto 11 ekuseni ngo-11pm.
Ukuxoxisana noSyvia Whitman, Umnikazi weShakespeare neNkampani
AmaParis aseGreat: uGeorge Whitman ku-Profile
09 ka 09
Ukuhambisa ama-Chicken of Clignancourt (Imakethe ye-Flea)
Inzalo ka-Niche? Ungathola ukuthi yikuphi okufunayo ku- "Amakhukhi". Fabio Sola Penna / Creative Commons
Kutholakale ngaphesheya komngcele osenyakatho weParis endaweni yokuma emgwaqeni yasePorte de Clignancourt, i- Chips de Clignancourt, imakethe endala kakhulu futhi ethandwa kakhulu emakethe, inikeza izinkulungwane ezinkulungwaneni zezinto, ezincwadini ezindala, amarekhodi, amakhokhethi, ifenisha kanye nekhaya izinto ze-deco, nezinye izinto ezingenakubalwa, eziningi zazo eziziqhenya futhi ezihlukumezayo zisuka ku-eras ziphele isikhathi eside. Kuthatha ukuhlunga okuningi ukuze uthole amagugu, kodwa uma usabhajethi oluqinile futhi ungakhathazeki ukumba, kuwufanele umzamo. Nokho, igama lesixwayiso: uqaphele ikakhulukazi ama-pickpockets aseParis ngenkathi upheqa izitayela lapha.
Kwesinye indawo kuwebhu: Bheka i-Cool Stuff ka-Manning Krull e-Paris - Kunconywa kakhulu kunoma iyiphi indawo endaweni enesiqhwaga, i-wacky noma i-creepy edolobheni lokukhanya!
Umhlahlandlela Wokuhambela Ukuvakashelwa eParis nge-Budget
Ukuhlola izakhamuzi zaseLouvre-Tuileries eParis
I-WiFi yamahhala e-Hotspots e-Paris
I-Colette Concept Shop e-Paris
Izenzakalo zeJanuwari eParis
I-La Closerie des Lilas I-Cafe ne-Restaurant
Uphi i-Peru etholakale khona?
Izikhathi Zokuhamba Kusuka Phoenix Kuya Kweminye Izindawo nase-Arizona Amadolobha
I-Ice Cream Parlors, Izitolo Zama-yogurt, Izitolo ze-Gelato e-Phoenix
I-Trakai Castle: I-Stronghold yaseLithuania edumile
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ze-Florida Beach ezihamba phambili ezihamba phambili
Umholi we-16 Arrondissement eParis
Umhlahlandlela Wokubaluleka Okubalulekile weHampi Yokuvakashelwa
Amathiphu Ohamba Ngabesifazane Abaya EYurophu EMpumalanga
Vedettes du Pont Neuf: Ukunikeza Cruises on the Seine eParis
Izinhlelo ze-Best Hotel Gyms and Fitness e-Austin
I-Montserrat Volcano Tour
Ihhotela lase-Hollywood Roosevelt
Lapho Uzobona iSanta e-Oklahoma City 2017